The Origin of Spilling Over Other People’s Pockets – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 18 August 2011 18 August 2011 Categories Discussion, Reproduction, Thoughts
10 thoughts on “The Origin of Spilling Over Other People’s Pockets”
Moe Pyae says:
ကျွန်တော့အစ်မ လည်း ဘန်ကောက် Piyavate Hospital မှာ နှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပီး သွားကုသေးတယ်
နှလုံးရောဂါကတော့ အရမ်းဂရုစိုက်ရမို့ အမြဲတမ်းဈေးကြီးတဲ့အထဲမှာပါပုံပါပဲ..
မြန်မာပြည်က စစ်ဆေးရေးနဲ့တွေ့ ပီးမှ နာမည်ကြီးဆရာဝန်တစ်ယောက်ရဲ့  လမ်းညွှန် မှုနဲ့ပဲ ဘန်ကောက်မှာသွားကုဖြစ်တာပါ.. ငွေကြေးကုန်တယ်ဆိုပေမဲ့ ကုန်တဲ့ငွေပမာဏ အတိုင်း ဝန်ဆောင်မှုကတော့အရမ်းကွာပါတယ်.. မြန်မာပြည် မှာ Echo (အသုံးအနှုန်းကတော့သေချာမသိပါ) ရိုက်တုန်းက ဆရာဝန်မတစ်ယောက်လုပ်ပေးတယ်. ရိုက်နေရင်းနဲ့ .. ဒီရောဂါရှားလို့ သူဟာသူ လန့်လို့လား ဘာလားတော့မသိပါဘူး.. အသံမာနဲ့ ညီမ နှလုံးက ခွဲ မှရမယ် .. ဘာညာပြောတယ်.. ရောဂါသည်က ကိုယ့်ရောဂါ ဘာမှန်းတောင် မသိသေးဘူး . ရောဂါကြောင့် ဘာမှမဖြစ်ဘဲ ဆရာဝန်မရဲ့  စကားကြောင့်ပိုလန့်နေပီ..
ဘယ်လိုမှမမျှော်လင့်ထားတဲ့ ရောဂါကြောင့် လူနာကို ပိုအားပေးရမယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးဗျာ..
နောက်မှပဲ စာရှည်၂ ရေးတော့မယ်.. ဆရာရေ.
ဆရာရဲ့ စာတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား
19 August 2011 at 5:55 pm
လုပ်ငန်းအပေါ် သဘောထားခံယူချက်ချင်း ကွာခြားနေသေးတာပါ။ ခေတ်အမြင် မတူကွာခြားခဲ့တာပေါ့… ထိုင်းက ကျန်းမာရေးကုသမှုမှာ စီးပွားရေးအရ ဝန်ဆောင်မှုကို ထည့်ပေးတယ်.. အခကြေးငွေပါ ထည့်ယူတယ်။ မြန်မာက ကျန်းမာရေးအတွက် ကုသမှုပေးနေတာ လို့ခံယူတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်နေတာလို့ အပြည့်အဝ မခံယူဘူး။ ဝန်ဆောင်မှု ကောင်းအောင်လုပ်ပြီး စီးပွားရေး ပီပီပြင်ပြင် ဖြစ်အောင် မလုပ်သေးဘူး။
Nay Oo ဝန်ဆောင်မှုသဘော မပါတာတောင် လက်မလည်အောင် လုပ်နေရတော့ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းထည့်ပြီး စီးပွားရေး တွက်ခြေပိုကိုက်အောင်လုပ်ဖို့ မစဉ်းစား နိုင်သေးဘူး ထင်မိပါတယ်။ အရင်က စ ကြားဖူးတာ .. ဒေါက်တာချိုလေးမာ ထင်တယ်။ နှလုံးအထူးကု .. ရိုးရိုးနဲ့ ရှယ် ဆိုပြီး .။ ရှယ်က မစေါင့်ရဘူး။ မေးချင်တာမေးလို့ နည်းနည်းရတယ်.. ပိုပြုံးပြတယ် … ဒါပေမယ့် လူတိုင်းက ရှယ်ကုန်ကြတော့ … မရှယ်တော့ပဲ .. ရိုးရိုးနဲ့ သိပ်မကွာ ဖြစ်သွားရော ဆိုလား…
ဆရာအတ္တကျော် ထည့်မပြောတာလား … အဲဒီ ကျေနပ်လောက်အောင် ဝန်ဆောင်မှုမျိုးအတွက် .. မြန်မာပြည်ထက် ဘယ်လောက်ပိုပေးခဲ့ရလဲ .. ကုသမှု(သို့) ဆေးစစ်မှုမှာ မြန်မာပြည်ထက် အပိုဆောင်းကုန်ကျမှု .. ခရီးစရိတ်၊ တည်းခိုစရိတ်၊ အချိန်ကုန်လိုက်ရတာအတွက် တန်ဖိုး၊ လုပ်ငန်းပျက်ကွက်ခဲ့ရရင် ပျက်ကွက်မှုကြောင့် ပေးဆပ်ရတဲ့ တန်ဖိုး။
အဲဒါတွေ အကုန်မဟုတ်တောင် အဲလိုကုန်ကျနိုင်တဲ့ငွေရဲ့ တစိတ်တပိုင်းလောက် တန်ဖိုးမြှင့်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းနဲ့ ထည့်ပေးရင် ဆရာအတ္တကျော်လို တတ်နိုင်သူတွေ ကိုယ့်အိပ်ထဲကို တကယ်ဖိတ်ပေးနိုင်ကြပါ့မလား .. အဲဒီကျတော့ မဟားဒရားရိတ်တယ်… ဝိသမ အမြတ်ကြီးစားတယ် … အော်ကြမှာက အများစု နိုင်ငံခြားကမှ ကောင်းတယ် .. ဂုဏ်ရှိတယ်.. ပေးရတာ တန်တယ်.. အထင်မျိုးက အတော်များများမှာ ရှိနေဦးမှာပါ။
http://www.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9830:2011-08-18-03-56-36&catid=78:2009-11-13-06-25-17&Itemid=135 မှာလည်း အထက်က ကွန်မန့်ရဲ့ အောက်ဆုံးပိုဒ်ကို “ဗေလု”ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ၏ သည် မလွဲ ပြန်ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီ့မှာ ကွန်မန့်က နှစ်ခုပဲ ရှိတယ်။ အောက်က ကွန်မန့်အမှတ် ၁ ကို အပေါင်း လက္ခဏာပေးထားသူ ၂၇ ဦး ရှိသော်လည်း သည်ကွန်မန့်ကိုတော့…
Eleven ရဲ့ သည်ဆောင်းပါးကို ပြန်လည်ဖော်ပြထားချက်အောက်မှာ နောက်ထပ် ကွန်မန့်တစ်ခု တွေ့ရပါတယ်။ မှတ်တမ်းမှတ်ရာအနေနဲ့ ကျွန်တော့်ဆီမှာ ကျန်အောင် အဲဒါကိုလည်း ကူးယူ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
phoehtet 2011-09-05 17:20
ကျနော် ဆရာဝန်တစ်ယောက် မဟုတ်ပါ..တကယ်ကျတော့ လူတွေက အားနည်းတဲ့ ထိလို့ ခိုက်လို့ရတဲ့ ပညာရေးနယ်ပယ်က ဆရာ၊ ဆရာမတွေနဲ့ ကျန်းမာရေး နယ်ပယ်က ဆရာဝန်/မ၊ ၀န်ထမ်းတွေကိုဘဲ ထိခိုက်နေတာပါ။ တကယ်ကျတော့ သူတို့ အပြစ်မဟုတ်ဘူးလို့ ကျနော် (တစ်ဦးတည်း အမြင်) မြင်တယ်။ ထိုင်းလို၊ စလုံးလို အဲဒီ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပညာရေး နယ်ပယ်မှာ အလုပ်လုပ်ရင်း ကိုယ့်မိသားစုအတွက် ဖူလုံမယ်၊ နောက်ကြောင်းအေးမယ်ဆိုရင် အဲဒီ အပေါက်ဆိုးတယ်၊ ၀န်ဆောင်မှုမကောင်းဘူးဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်။ အခုက ဂျာအေး သူ့အမေရိုက်နေတာ။ ပိုက်ဆံမရှိဘဲ အဲဒီဌာနတွေက ဘယ်လို ကောင်းအောင် ပြင်မလဲ။ နိုင်ငံဘတ်ဂျက်ရဲ့ ဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းကိုဘဲ သုံးတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိတယ်။ ပညာရေးနဲ့ ကျန်းမာရေး မှာ ပိုက်ဆံပိုသုံးရမယ်ဆိုတဲ့ ပညာတတ်အစိုးရ မရှိမချင်း လုပ်ချင်ရာလုပ်၊ ဘယ်တော့မှ မတိုးတက်ဘူး။ အရေးအခင်းတွေဖြစ်လိုက်၊ စစ်တပ်က ပြန်အာဏာသိမ်းလိုက် ဖြစ်နေအုံးမှာဘဲလို့ ထင်တယ်။
နောက် ကျနော်က ဆရာအတ္တကျော်စာတွေကို ဆူဒိုနင်ဆိုတဲ့ ကလောင်ကတည်းက ဖတ်မိတယ်။ ဆရာ့စာတွေ ကြိုက်ပါရဲ့။ တစ်ခါတစ်လေတော့လဲ ကိုယ်ရည်သွေးတာတွေ ပါနေသလားလို့ မြင်မိတယ်။ ဒါ ကျနော့်ရဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ အမြင်ပါ။
အဲဒီ့ ကွန်မန့်လေး ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ကျွန်တော် စာရေးတာပဲ ညံ့လွန်းသလား၊ စာဖတ်တဲ့သူကပဲ မျက်စိလျှမ်းတာလားတော့ မသိဘူး။ ကျွန်တော် ရေးခဲ့တာက အများနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုကို ပြောနေတာ လုံးဝ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ပိုက်ဆံတွေ မနိုင်ရင်ကာ ယူနေကြတဲ့ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းတွေရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေကို ပြောနေတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို စာလုံးမည်းကြီးနဲ့ ထည့်ရေးမှပဲ သည်အချက်ကို နားလည်သဘောပေါက်ကြတော့မှာလားလို့တောင် တွေးမိရတဲ့အထိ သည်ဆောင်းပါးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြန်ကြားရတဲ့ တုံ့ပြန်ချက်တချို့မှာ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍနဲ့ လူထုဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍကို ရောချပြီး တုံ့ပြန်ကြတာတွေ တွေ့ရပါတယ်။ တော်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိရတာပါ။
“တစ်ခါတလေ ကိုယ်ရည်သွေးတာတွေ ပါနေသလားလို့ မြင်မိတယ်” ဆိုတာအတွက်တော့ ကျေးဇူးတင်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လို စကားလုံးတွေ၊ ဘယ်လို ရေးလိုက်တာတွေက ကိုယ်ရည်သွေးရာ ရောက်ပါတယ်လို့သာ ထောက်ပြခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်အတွက် ပိုအကျိုးရှိမှာပါ။ အခုလို လုံးချပြီး တံဆိပ်ကပ်ပေးလိုက်တာကျတော့ ကျွန်တော့်ဘက်က ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လို ပြင်ရမှန်း မသိအောင် ခက်ခဲနေပါတယ်။ ဒါလည်း စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ ရွှေတွေမှာက အပြုသဘောဆောင်တဲ့ မှတ်ချက်မျိုး ပေးတဲ့ အလေ့အထမှ မရှိတာကိုးလေ။
ဆရာခင်ဗျာ.. ဆရာပြောတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုဆိုတဲ့သဘောကို ကျွန်တော်တို့ ဆီက အတော်များများသဘောမပေါက်ကြသေးပါဘူးခင်ဗျာ….
ကျွန်တော်တို့ ဆရာဝန်တွေ အတော်များများက ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကယ်တင်ရှင်ကြီးတွေဆိုတဲ့ အမြင်ဝင်နေကြတာတွေများနေပါတယ်…အထူးသဖြင့် လူငယ်ဆရာဝန်ပေါက်လေးတွေပါ…ဆရာဝန်ဆိုတာ ဆေးကုသတဲ့ အလုပ်နဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနေတာပါ…အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုကထဲက ထိုက်သင့်တဲ့အဖိုးအခကိုတော့ ယူမှာပါပဲ..အဖိုးအခယူပီးဆိုကထဲက ထိုက်သင့်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတော့ ပြန်ပေးရမှာပါပဲ…(ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်တဲ့ လူနာတွေကို အလကားကုပေးရတာကို ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ အထဲမှာမပါပါဘူး..ဒါက ဆရာဝန်တယောက်လုပ်ရမဲ့ ကျင့်ဝတ်နဲ့ ဝတ္တရား ပါပဲ)
ဆရာ အတ္တကျော်ဆိုလိုချင်တဲက အဓိပ္ပါယ်က ပိုက်ဆံပေးရတာချင်းအတူတူ စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါဗျာ. အမှန်ပဲဗျ ဘယ်သူမဆိုပိုက်ဆံကို စိတ်ချမ်းသာသာနဲ့ပဲကုန်စေချင်မှာပေါ့ နောက်ပြီးလူနာ ကိုလူနာလိုဆက်ဆံတာလေးတစ်ချက်ကိုတော့ ကြိုက်တယ်ဗျာ.
eiei khaing says:
ဆရာ သမီးမှာမေးစရာရှိလို့ ဆရာ့ gmail address လေးပေးနိုင်မလားရှင့်